WikiLeaks: Mivadika Ôrera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2016 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Français, Español, English
Sary avy amin'ny Vondrona Fanangonam-baovaon'ny WikiLeaks Mobile ao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Raha namoaka ny tahirin-kevitra miisa 61.000 avy amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Saodiana ilay tranonkala pro-fangaraharana WikiLeaks, dia narantin-dry zareo ny fomba fifandraisana sy ireo torohevitra manandanja ahafahana mahafantatra ny fomba fiasan'ny Diplaomasia Saodiana ao anatiny ao. Farafahakeliny ihany koa dia fandraketana sy torohay ara-pahasalamana hafa an'olon-tsotra miisa 124 no navoakan-dry zareo , araka ny tati-baovaon'ny 23 Aogositra navoakan'ny Associated Press.
Namoaka anaran'olona tanora lasibatry ny fanolanana ny roa amin'ireo fandraketana ara-pahasalamana ireo. Ny iray hafa indray nampiharihary ny mari-panondroana olom-pirenena saodiana iray nosamborina amin'ny maha-pelaka azy, izay nantsoin'ny AP “hetsika mivoaka ny mahazatra” ho an'ny firenena iray izay iharan'ny fanilikilihana ara-tsosialy, fanagadrana, fampijaliana ary hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza izany saikatra (pelaka) izany.
Maro amin'ny olona no niditra avy hatrany tao amin'ny media sosialy haneho ny fahatezerany. Nanoratra i Joey Ayoub, Tonian'ny Global Voices any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, fa mety mahatonga fahafatesana ho an'olona sasany ny fiporitsahan-tahirin-kevitra tahaka izany.
Mety hihatra aman'aina amin'olona sasany ireny poritsaka ireny. Tena maharikoriko. Naharihary ny fiainan'olona an-takonana noho ny famoahan'ny @WikiLeaks ny tsiambaratelony”
Nantsoin'ny mpahay tantara sady mpahay fahagola Sara E. Palmer ho doxxing, milaza ny fomba famoahana ampahibemaso ny mombamomba ilay olona (tahaka ny adiresy, laharan-telefonina, laharan-karapanondrom-pirenena) tsy nahazoana alalana, misy fikendrena hanimba ilay olona izany.
Tsy tolona ho amin'ny marina intsony izany, efa doxxing izany, doxxing amin'ny tsy fahaiza-manao.
Nanjary nalaza ny WikiLeaks tamin'ny Avrily 2010, rehefa namoaka lahatsarin'ny angidimby Apache an'i Etazonia anankiroa nanao tifitra an'habakabaka teo Baghdad tamin'ny 12 Jolay 2007 izay nahafatesan'olona tokony ho 12 teo ho eo, ka anisan'izany ny mpanao gazetin'ny Reuters miisa roa. Nitondra ny lohateny hoe “Collateral Murder” izany lahatsary izany, ary nahazo ny voaloham-pejin-gazety avy hatrany, ary nahatonga ny WikiLeaks halaza teo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Nahatonga ny WikiLeaks hahazo mpanohana maro dia maro izany fironana amin'ny famoahana ho hitam-bahoaka izany fihoaram-pahefana, kolikoly ary tsy fisian'ny mangarahara izany. Teo aloha dia nanoritra mazava ny solontenan'ny fikambanana ny fiezahany hiaro amin'ny fomba rehetra ny fiainana an-takonan'olon-tsotra amin'izay mety ho fiantraikan'ny famoahana tahirinkevitra tsiambaratelo tahaka ireny.
“Manana politikam-pampihenana izay mety hanohintohina olon-tsotra izahay,” hoy i Assange tao amin'ny seminera iray tao Oxford, tamin'ny Jolay 2010. “Misy ny tokony hotazonina ho tsiambaratelo. Ny tahirin-kevitra ara-pahasalamana avy amin'ny dokoteranao, tokony hotazonina ho tsiambaratelo izany.”
Saingy mihamitombo ny faneriterena azon'ny fikambanana, sy ny fahombiazana ihany koa, mihamaro ireo ohatra mipongatra amin'ny famoahana fiainan'olona an-takonana izay tsy olona manandaza akory.
Ankehitriny lasa mamoaka tahirin-kevitra ara-pahasalaman'ny olona ny WikiLeaks. Ary toa tsy mivaky loha amin'izany. Mbola misy mieritreritra ve fa zavatra tsara izany ?
Tamin'ny 22 Jolay 2016, namoaka mailaka an'arivony avy amin'ny lohamilin'ny Komity Demaokraty Nasionaly ao Etazonia ahitana ny ezaka anatiny ataon'ny antoko demaokraty hanohintohina ny fanentanan'i Bernie Sanders hironana any amin'ny fanentanan'i Hillary Clinton ny WikiLeaks. Nampidirin-dry zareo tao ihany koa ny anarana feno, ny adiresy, ny laharan-telefonina, ny laharan'ny pasipaoro ary ny laharan'ny fiahiana ara-tsosialin'ireo nanolotra fanomezana ho an'ny antoko. Nilaza tamin'ny AP ny roa tamin'ireo voatonona anarana fa nisy nangalatra ny mari-panondroan'izy ireo taorian'ny famoahana ireo tsiambaratelo ireo.
Any amin'ny ohatra hafa indray, navoakan'ny WikiLeaks ny imailaka maro avy amin'ny antoko AKP ao Torkia, antokon'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan mitondra amin'izao fotoana izao. Nojeren'ny mpikatroka sy ny mpanao gazety Tiorka ireny mailaka ireny, ary hitan'izy ireo fa tsy mahaliana ny torohay avy ao amin'ny ankapobeny. Ankoatra izany, nitatitra toy izao ny mpampianatra-mpikaroka tiorka momba ny media vaovao Zeynep Tufekci :
Navoakan'ny WikiLeaks ho an'ny mpanjohy azy an-tapitrisany amin'ny alalan'ny fantsona maro ao amin'ny media sosialy ihany koa ny rohy maro mankany amin'ny lahatahiry saro-pady an-tapitrisany ka ao anatin'izany ny lahatahiry manokana saika ahitana ny vehivavy ampy taona rehetra ao Torkia.
Rakitra ara-pahasalamana, trosa, fampahafantarana manokana… Ataon'ny WikiLeaks ho Fahavoazana miara-zakaina ny fiarovana sy ny fiainana an-takonan'olon-tsotra.
Tsara ihany koa ny milaza, araka ny notaterin'ny tetikasa Global Voices Advox tamin'ny herintaona, fa farafahakeliny ny sasany amin'ireo dosie mipaingotra navoakan'ny WikiLeaks no misy rindrantsompatra izay mety mampidi-doza izay rehetra mijery izany. Na ny poritsaka AKP na ny imailaky ny ‘Hacking Team’ nivoaka tamin'ny 2015 dia samy ahitana rindrantsompatra (viriosy).
Nahitana torohain'olon-tsotra saropady mety ahafantarana azy ny poritsaky ny WikiLeaks, ary dia misy rindrantsompatra ankehitriny.
Mitaky fanazavana amin'izao fihetsiky ny WikiLeaks izao ireo mpiaro ny zon'olombelona. Taorian'ny famoahana ny poritsaka Afghan War Diary, dia notakian'ny Amnesty International sy ireo vondrona hafa mpiaro ny zon'olombelona ny WikiLeaks hanaisotra ny anaran'ireo sivily Afghan mpanome vaovao ny Tafika U.S. amin'ireo tahirin-kevitra navoakan-dry zareo, mba hiarovana azy ireo tsy ho tratran'ny famaizana.
Toy izao ny valintenin'i Assange ho an'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona, “Tsy manam-potoana holaniana amin'ny olona tsy mahavita na inona na inona, afa-tsy fiarovana ny vodiny.” Mihamitombo ny isan'ireo olona ahiana idiran-doza noho ny politikam-poritsaka tsy manaisotra anaran'olon-tsotra ataon'ny Wikileaks, tsy fantatra moa raha hitan'i Assange ny karazana fihatsaram-belatsihy ao anatin'izany fanambarana izany. Ny mazava kosa anefa, dia efa tsy mahazo ny fanohanam-bahoaka tahaka ny taloha intsony ny WikiLeaks.